Amabhizinisi Amancane Ayisebenzisa Kanjani Isoftware Ukuphatha Oxhumana Nabo | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 1, 2012 NgeSonto, uJanuwari 1, 2012 Nick Carter
Ngaphezulu kwamaphesenti angama-90 amabhizinisi amancane asebenzisa indlela ethile yedijithali yokuphathwa kwedatha ukugcina oxhumana nabo, kubonakala sengathi amabhizinisi amancane angene enkathini yedijithali. Kepha, besifuna ukwazi ukuthi la mabhizinisi amancane enzani ngemininingwane yokuxhumana. Esikutholile kungakumangaza. Ungathola imiphumela ephelele yocwaningo ku- IkheliIyunivesithi emibili.
UNick Carter ungusomabhizinisi ngenhliziyo. Ungumbhali we Akuxhasiwe, kanye nomsunguli we-AddressTwo, a Ibhizinisi elincane I-software ye-CRM enikeza osomabhizinisi amathuluzi nezinqubo zokuphatha ukuthengisa kwabo nokwenza i-automate ukumaketha kwabo.
I-Viralheat: Ukuqapha Komphakathi Kwama-SMB